Go'aano Cusub oo laga Filayo Dowlada Sweden Maanta Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaGo’aano Cusub oo laga Filayo Dowlada Sweden Maanta
Go’aano Cusub oo laga Filayo Dowlada Sweden Maanta
March 31, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Maanta, dowladdu waxay soo bandhigeysaa go’aanno cusub oo ku saabsan xaddidaadaha lagu soo rogay si loo xadido faafitaanka cudurka Corona.
Dowladda ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo kordhinta tallaabooyinka jira sababo la xiriira faafitaanka cudurka oo ku sii kordhaya dalka.
Raiisel wasaare Stefan Löfven ayaa lafilayaa in uu qabto shir jaraaid galinka dambe ee maanta, waxaana kasoo qeyb galaya wasiirka arimaha bulshada Lena iyo wakiilo ka socda hey’ada caafimaadka bulshada. Taariikhda rasmiga ah ee shirku qabsoomayo weli lama oga. Sida ay qortay jariidada Aftonbladet.
Tilaabooyin dhowr ah oo ay dowladu soo rogtay waxay ahayd inay si dhakhso leh udhamaadaan, sida xiritaanka makhaayadaha iyo baararka 20:30.
Mamnuuciddu waxay dhaqan gashay 1-dii Maarso waxayna sii jiri doontaa illaa iyo 11-ka Abriil illaa aan la kordhin. Tallaabooyinka ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in hal qof loo oggolaado inuu fariisto miiska maqaayadaha ku dhex yaal suuqyada waaweyn.
Hay’adda Caafimaadka Dadweynaha ayaa shalay ka codsatay dawladda inay dib u dhigto hawsha fududeenta ee loo baahnaa in lagu dabbaqo 11 Abriil “xaaladda halista ah” ee faafitaanka cudurka ee dalka awgeed. Fududeynta xayiraadaha waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, kordhinta isu imaatinada dadweynaha.